သူ့ကို အမှုမကြီးကြီးအောင် လုပ်နေတယ်ဆိုကာ ဒါရိုက်တာဝိုင်းကို ဒဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့ ယုန်လေး | Myanmar Cele Tube
ယုန်လေးကတော့ လက်ရှိမှာ အွန်လိုင်းကြော်ညာများ ရိုက်ကူးကာ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ အဆက်မပြတ် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ယခုတခါမှာတော့ ယုန်လေးကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ကြော်ညာဟာ -ိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြားမှု နှောင့်ယှက်မှုတွေ ပါဝင်နေခဲ့တယ်ဆိုကာ ဝေဖန်ခံနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဝေဖန်ထောက်ပြသူတွေထဲမှာ အနုပညာရှင်အချို့လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ ဝိုင်းကတော့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့် ” ယုန်ကို အာရုံရောက်နေရင် နောက်က မိထားတဲ့ ကျား လွတ်သွားလိမ့်မယ်။ လက်မည်းတာကောနဲ့ အာဏာရှင်တွေက အာရုံလွှဲတဲ့ ဗြူဟာ သိပ်ကျွမ်းကျင်တာ ” ဆိုကာ ပရိတ်သတ်တွေကို သတိပေးစကား ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ဒါရိုက်တာ ဝိုင်းရဲ့ ပို့စ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ယုန်လေးကတော့ အခုလိုပဲ တုန့်ပြန်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ” ကိုဝိုင်း ရေ အစ်ကို့ ကြည့်ရတာ အကုသိုလ် များလိုက်တာဗျာ .ကျွန်တော် အစ်ကို အနုပညာကို လေးစားတဲ့ လူပါ . အစ်ကို့ ကို တစ်ခါ မှ Foul မထုဖူးပါဘူး .တွေ့တိုင်း လည်း လေးလေးစားစားဆက်ဆံပါတယ် .
ဘယ်လို ဖြစ်လို့ . နိုင်ငံရေး ထဲ လိုက်ဆွဲထည့်နေတာလဲ.ဘယ်သူကရော MI STAR ကြေညာကို စိတ်ဝင်စားခိုင်းလို့လဲ. . .မိန်းကလေး အကောင့်အစစ်တွေတစ်ချို့ တကယ်သူတို့ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေဖြစ်သွားလို့ . ဆဲတယ် .နောက်ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ရင်ပို သတိထားရမယ် ဒီလောက်ပဲ မဟုတ်ဖူးလား .အမူ့မကြီးကြီး အောင်ဆွဲချဲ့ကျတယ် .ကြီးသွားတော့ အာရုံလွှဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးထပ်စွတ်ဆွဲတယ် . အနုပညာ အလုပ်အကုန်ရပ်ပေးစေချင်တာလား .Fb ပါရွေးကောက်ပွဲ ပြီးမှ သုံးရတော့မှာလားဗျာ ” ဆိုကာ တုန့်ပြန်ခဲ့တာပါ။
ပရိတ်သတ်ကြီးကရော ယုန်လေးရဲ့ ယခု ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ကြော်ညာဗီဒီယိုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အမြင်လေးကိုလည်း ပြောခဲ့ပါဦးနော်။​ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တယောက်စီတိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။